कैलाशको कुटी: दशैँ आयो खाउँला पिउँला
Posted by कैलाश at 2:40 PM
kailash g le ta malai pani balya kal ra dashain ma gaaugharko yad dilai dinu bho , oho bungur ko kura ma pani tysbela garma ramrari nai herthe tar malai bungur mare ra hami khusi bhayeko man pardain thiyo , jehos tapaile aaphno balya kalko aaphno ramailo katha jasto kathaa sharing gar nu bhako ma dherai dherai dhanyabad.....
'ए ! दशैँ आईसकेछ ? ' तपाईंसंग कुरा गर्दागर्दै तपाईंको कुटीमा छिर्दा मलाई यस्तै भन्न आयो ।
पढ्दै लाँदा बाल्यकालको दशैंको सम्झना बल्झियो । बेदनाथजी पनि बल्झिनुभएछ बाल्यकालको दशैंको सम्झनामा ।
पुछारमा सोधिखोजी गर्दाको कुरापनि उल्लेख भएको देख्दा विश्वास भयो मायाँ मार्नुभएको हैन रहेछ ।
अनि कैलाश जी , दशैंको शुभकामना है तपाईँलाई र तपाईंको कुटीमा मित्रताको टिको थाप्न आउनुहुने सबै साथीभाईलाई । ( अनि यत्रो दशैंको कथामा पनि शुभकामना भन्न तपाईंले बिर्षनु भएको हो कि ? बाँकी हो कि ? कि अब नभन्दा नि हुने चलन आईसकेको हो गाँठे ! )
धन्यवाद शुभकामनाको लागि। दशैँ बोलाएको मात्रै हो दीपकजी अहिले त । शुभकामनाको आदानप्रदान गर्नलाई काफी समय बाँकी नै छ भन्ने लागेर नि हतार लागेन । जे होस् बेदनाथजी र दीपकजीलाई दशैँको शुभकामना छ है। पछि फेरी शुभकामनाको टाँसो लगाउँ कि भन्ने सोच चाहि छ। हेरौ न।